Maxaa ka jira in Goolhaye David de Gea laga saaray xulka Spain sababo la xiriira fal galmood oo lagu soo eedeeyay? – Gool FM
Maxaa ka jira in Goolhaye David de Gea laga saaray xulka Spain sababo la xiriira fal galmood oo lagu soo eedeeyay?
Byare June 10, 2016
(France) 10 Juunyo 2016. Tashwiish xoogan ayaa lagu furay goolyahaya xulka Spain David De Gea xilli uu caawa furmayo tartanka xiisaha badan ee Euro 2016.
Waxaa lagu soo eedeeyay inay ku tacadiyeen gabar jirka ka ganacsata isaga iyo laacibka Athletic Bilbao ee Iker Muniain iyo waliba mid aan la magac dhabin oo ka mid ah xiddigaha 21-jirada xulka Spain falkaan ayaana la sheegayaa in la geystay 2012 oo ay iminka baarayaan booliska.
De Gea ayaa sheegay in markii ugu horreysay uu aqbaartan maqlo uu durba wacay reerkiisa isla markaana u sheegay inuusan wax ka jirin warkaa isla markaana been abuur yahay.
Waxa lagu heysto De Gea ma ahan inuu joogay meesha lagu tacadinayay gabarta la jir dilay oo xitaa la siinin lacagaha lagu soo kireystay balse waxaa la sheegay inuu soo qaban qaabiyay howshan habeenkaa oo uu la waday ninka la yiraahdo Torbe oo uu magaciisa rasmiga yahay Allende Fernandez.
De Gea ayaa sidoo kale sheegay inaysan waxba ka jirin eedeemahan wuxuuna ku adkeestay inuu xulkiisa la sii joogi doono koobka Euro 2016.
“Waxaan ahay qofkii ugu horreeyay oo la yaabay sheekadan, gabi ahaan waa been iyo been abuur aan wax ka jirin,” ayuu shirka jaraa’id ka yiri goolhaye De Gea.
“Tani waxay I siineysaa quwad badan inaan la sii joogo kooxda, hadda waxay sheekada ku jirtaa gacanta qareenadeeda.
“Waxaan la sii joogi doonaa xulka qaranka, waxaan heystaa awooda iyo taageerada saaxiibadeeda xulka waxaana doonayaa inuu ku dagaalamo Euro.”.
Laga soo bilaabo reer Pogba ilaa iyo ilma Xhaka!! Aqri walaalihii heer qaran isku fara saaray.....
Shaxda Rasmiga ah ee kulanka furitaanka Euro 2016 France vs Romania